Wararkii ugu dambeeyay dadaalada lagu dhexdhexaadinayo Somaliya iyo Kenya | Dhacdo
Home Uncategorized Wararkii ugu dambeeyay dadaalada lagu dhexdhexaadinayo Somaliya iyo Kenya
Wararkii ugu dambeeyay dadaalada lagu dhexdhexaadinayo Somaliya iyo Kenya
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka shaqeynaysa, sidii leeskugu soo dhaweyn lahaa Dowladaha Somaliya iyo Kenya, oo xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhex taagan tahay,
Urur Goboleedka IGAD ayaa Jabuuti u wakiishay in ay xal ka keento khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Xukuumadda Muqdisho iyo Nairobi.
Maxamuud Cali Yuusuf, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti ayaa Arbacadii sheegay in Jabuuti la weydiistay inay ka shaqeyso dejinta xiisadda siyaasadeed ee gobolka ku soo korortay.
“Waxaan aaminsanahay in Jabuuti ay door ka ciyaarto nabadda iyo xasiloonida gobolka, shirkii ugu dambeeyay ee IGAD ee ka qabsoomay Jabuuti ayaana lagu go’aamiyay inaan sii wadno dejinta xiisadda ka taagan gobolka.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa tilmaamay in wafdi ka socda Somaliya ay maanta taggi doonaan Magaalada Djibouti, isagoona ujeedada socdaalkooda ku sheegay mid lagu qiimeynayo xiisadda ka taagan xuduudda labada dalka.
“Khamiista waxaa dalka Jabuuti imaanaya wafdi heer sare ah oo isugu jira Saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin, kuwaa ka imaan doona Somaliya.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri “Ujeedada socdaalka ayaa waxa uu ahaan doonnaa in la qiimeeyo xaaladda xuduudda Beled Xaawo iyo Mandhera, waana hawl ay u igmadeen Madaxda IGAD Jabuuti in ay ka shaqeyso hawlaha ama xiisadda ka taagan xadka Somaliya iyo Kenya.”
Madaxweyne-yaasha Somaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa Axadii lagu kulansiiyay dalka Jabuuti, waana saacado yar ka hor intii aanu dalkaasi ka furmin shirkii ay ku lahaayen Madaxda Urur Goboleedka IGAD.
Somaliya ayaa 14-kii bishan ku dhawaaqday in ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Kenya, ka dib markii ay ku eedeysay in fara-gelin qaawan ay ku hayso arrimaheeda gudaha.
Previous articleWariye Dulyar oo lagu xiray Beledweyne, markii uu wareystay General Xuud
Next articleFESOJ oo cambaareysay xariga Wariye Dulyar loogu gaystay Beledweyne